Meles Zanawi oo sheegay in DKMG uu gacan kasiinayo ciribtirka Shabaab | raascasayrmedia.com
← Banaanbax la’isku rasaaseeyay oo ka dhacay Muqdisho
Madaxweyanha Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo kulan ku yeeshay Addis Ababa →
April 15, 2011 · 7:37 pm
Meles Zanawi oo sheegay in DKMG uu gacan kasiinayo ciribtirka Shabaab
Dowladda Ethiopia ayaa shaaca ka qaady in dowladda KMG Soomaaliya ay gacan kasiinayso sidii loo ciribtiri lahaa Xarakada Al Shabaab ee dagalada kula jirta dowladda Soomaaliya.
Kadib kulan Magaalada Addis’ Ababa ee Xurunta dalka Ethiopia ay ku qaateen Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Ra’iisul wasaaraha dalka Ethiopia Meles Zanawi ayaa waxaa faah faahin dheeri ah ay kasoo baxysaa kalunka ay yeesheen Mas’uuliyiintaasi.
Ra’iisul wasaaraha Ethiopia Meles Zanawi oo kulankaasi kadib Saxaafadda la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in dowladda KMG Soomaaliya uu gacan ka siinayo la dagaalanka Xarakada Shabaab oo dagaalada kula jirta dowladda Soomaaliya iyo Ciidamada Midowga Afrika AMISOM ee ku sugan Magaalada Muqdisho.
Meles Zanawi waxa uu sheegay inay danaynayaan in lasoo celiyo xasilinoodii iyo kala dambeyntii uu lahaa dalka Soomaaliya hase ahaatee uu sheegay in nabad ka dhalata dalka Soomaaliya ay kasoo horjeedaan kooxo uu uga yeeray Argigixisada Soomaaliya.
“Dowladda Ethiopia waxa ay diyaar u tahay sidii DKMG ay gacan ugua siin lahayd Ciribtirka kooxaha xagjirka ah ee Soomaaliya dagaalada kawada” ayuu yiri Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Ethiopia Meles Zanawi.
Dowladda dalka Ethiopia ayaa waxaa hadda ka hor caawinaad buuxda oo dhinaca Milatirga ah ay siisay dowladdii uu Madaxweynaha ka ahaa Mudane C/laahi Yuusuf Axmed, iyadoo xiligaasi Ciidamadii Ethiopian-ka ahaa ee soo galay gudaha Maagalada Muqdisho ay meesha kasaareen awoodii gobolo ka mid ah dalka Soomaaliya ay ku lahaayeen Midowgii Maxaakiinta Islaamiga ah oo xiligaasi ku kacsanaa dowladii jirtay.